Actualidad အိုင်ဖုန်းထဲမှာငါတို့သယ်ဆောင်လာတယ် 10 နှစ်ကျော် အက်ပဲလ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများ၊ သင်ခန်းစာများ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ အများကြီးပို ဓမ္မဓိivity္ဌာန်ကျကျမေ့ပျောက်ခြင်းမရှိဘဲ၊ Apple နှင့်သက်ဆိုင်သောစပိန်စကားပြောသောဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်.
Actualidad အိုင်ဖုန်းအဖွဲ့သည်အဖွဲ့တစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် အက်ပဲလ်ထုတ်ကုန်တွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောကြေညာသူများ။ တကယ်တော့များစွာသောငါတို့ဟာပထမဆုံး iPhone ကိုရွှေလိုအထည်ပေါ်မှာဆက်ထားကြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်တွင်သင်ခန်းစာအပိုင်းမှမည်သည့်ပြstrangeနာကိုမဆိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ သင်ရှာမတွေ့ပါကအဖြေရှာရန်ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွကြိုးစားနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ကိုဆက်သွယ်ပါ။
နှစ်စဉ်စျေးကွက်တွင် Apple စတင်မိတ်ဆက်သောထုတ်ကုန်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ်မှအပြည့်အ ၀ ဆန်းစစ်လေ့လာနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လည်း Apple ၏တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏အရေးကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းများစတင်ခြင်းကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း၊ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုတစ်ချက်ချင်းစီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ မည်သည့်အချိန်တွင်သမာသမတ်ကျမှုကိုမဆုံးရှုံးစေပါ.
Actualidad အိုင်ဖုန်းအယ်ဒီတာအဖွဲ့သည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် iPhone ကျွမ်းကျင်သူများ Apple
အကယ်လို့သင်ဟာ Actualidad iPhone အသင်းရဲ့အသင်းဝင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီပုံစံကိုဖြည့်ပါ
အလုပ်အကိုင်အားဖြင့်ဆေးပညာနှင့်ကလေးအထူးကု၏ဘွဲ့။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံး iPod nano ကိုဝယ်သည့်အချိန် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ Apple သုံးစွဲသူ။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး iPhone, iPad, Mac, AirPod, Apple Watch အမျိုးမျိုးဟာငါ့လက်တွေဖြတ်သန်းသွားကြပြီ။ ရွေးချယ်မှုနဲ့လိုအပ်ချက်အရငါဟာနာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ခြင်း၊ ကြည့်ခြင်းနှင့်နားထောင်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးငါသိသမျှအရာအားလုံးကိုသင်ယူခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် Apple နဲ့အတူလုပ်လိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့်ဘလော့၊ YouTube channel နဲ့ Podcast မှာကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။
ငါနည်းပညာနှင့်အားကစားအမျိုးမျိုးတို့နှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုငါစိတ်အားထက်သန်မိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းက iPod Classic နဲ့ကျွန်တော်စတင်ခဲ့တာပါ။ သူတို့ဘယ်တော့မှလက်ကိုမြှောက်စရာမလိုဘူး - အရင်ကသူတတ်နိုင်သလောက်နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေနဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တော့်ရဲ့အက်ပဲလ်အတွေ့အကြုံဟာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိပေမယ့်သင်ဟာအကြောင်းအရာအသစ်တွေကိုသင်ယူဖို့အမြဲအသင့်ရှိနေပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာနည်းပညာတိုးတက်လာတာမြန်တယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ ၁၂၀GBGB iPod Classic သည်ကျွန်ုပ်လက်ထဲသို့ရောက်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Apple ကိုစိတ်ဝင်စားမှုမှာနိုးထလာခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်လက်ထဲသို့နောက်ထပ်လာမည့် iPhone 2009 ဖြစ်သော Movistar နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမရှိတော့သည့်နှစ်နှင့်နီးပါးနှစ်စဉ်နီးပါးရှိနေသော iPhone ဖြစ်သည်။ ငါပုံစံသစ်ကိုသွား။ ဒီမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံကအရာအားလုံးပါ။ ၁၂ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ Apple ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ကျွန်တော်အတူရှိနေခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏အသိပညာကိုနာရီနှင့်နာရီများပေါ်တွင်ရရှိသည်ဟုပြောနိုင်ပါတယ်။ အားလပ်ချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်အဆက်ပြတ်သော်လည်း iPhone နှင့် Mac နှင့်အလွန်ဝေးကွာသွားသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုတွစ်တာတွင် @jordi_sdmac အဖြစ်တွေ့လိမ့်မည်။
ဟယ်လို! ငါ Apple ကမ္ဘာမှာ iPod Shuffle နဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အရာရာတိုင်းဟာအံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။ မင်းကို iTunes playlist ထဲမှာပါ ၀ င်တဲ့ကျပန်းသီချင်းတွေနဲ့အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်။ ထိုအခါ iPod Nano၊ iPod Classic နှင့် iPhone4ထွက်လာသည်။ Cupertino ဂေဟစနစ်ကိုစွဲမက် မိ၍ ကျွန်ုပ်သည် Actualidad iPad တွင်ကျွန်ုပ်၏နေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Geek ကိုမျှဝေသည့်အလွန်ကြီးစွာသောအဖွဲ့နှင့်အတူ Actualidad iPhone သို့ခုန်ကူးခဲ့သည်။ "Cupertino ၏, ငါနှင့်အတူငါနေ့တိုင်းသင်ယူဆက်လက်။ ဆက်သွယ်မှုဖြတ်တောက်မှု? ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Apple gadget နဲ့😉
Apple ကကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကိရိယာများကိုဖန်တီးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အဆက်မပြတ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောစကြဝuniverseာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လိုသည်။ ကျွန်ုပ် manzanitas နှင့်တွေ့ကြုံမှုအသစ်များကိုလေ့လာပြီးလေ့ကျင့်ရန်နှင့်စာဖတ်သူများအားမျှဝေရန်ကျွန်ုပ်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ Apple Watch ကကျွန်တော့်ဘဝကိုကယ်တင်ပြီးကတည်းကဂျော့ဘ်ဖန်တီးခဲ့သောစကြဝuniverseာကိုချိတ်ထားသည်။
မက်ဒရစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်နည်းပညာကိုနှစ်သက်ပြီးအထူးသဖြင့် Apple နှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးဖြစ်သည်။ iPod နဲ့နောက်ပိုင်းမှာ iPhone ထွက်လာကတည်းကကျွန်တော့်ထုတ်ကုန်အားလုံးအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နိုင်မယ့်ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းရမလဲဆိုတာကို Apple ကကမ္ဘာကြီးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။
ငါအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းတွေ၊ အထူးသဖြင့် Apple အမှတ်တံဆိပ်ကိုနှစ်သက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းပေါ်ရှိဂီတအမျိုးမျိုးကိုနားထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသံအရည်အသွေးကောင်းခြင်းကြောင့်၎င်းသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်အသုံးဝင်နိုင်သောအက်ပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားရသည်ကိုနှစ်သက်သည်။
ဗိသုကာနှင့် geek, အင်တာနက်ကိုအကြောင်းကိုအသည်းအသန်, နည်းပညာအသစ်များနှင့် Apple ကမ္ဘာ။ အစဉ်မပြတ်ငါရေးသားခြင်းနှင့် iPhone ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အစဉ်အမြဲငါမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဒီအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးနှင့်ပတ်သက်။ လေ့လာသင်ယူ။
သတင်းစာဆရာ iPhone သည်အထူးပြု အံ့သြဖွယ်ရာများကိုလုပ်ရန်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူသောအသက်တာရရှိရန်အတွက်ဤအမှတ်တံဆိပ်မှထုတ်ကုန်အသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်ကမ္ဘာသို့ကျွန်ုပ်ခရီးသွားသည်။
Louis of the Boat ၊
Apple နည်းပညာကိုနှစ်သက်သောသူသည်ဗဟုသုတကိုမျှဝေရန်နှင့်အခြားသူများထံမှသင်ယူရန်ကြိုးစားသည်။ ငါကြိုးစားသမျှကိုစိတ်အားထက်သန်အောင်ကြိုးစားတယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ iPhone ကမင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတိုးတက်အောင်ကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Cristina Torres နေရာချထားပုံ
လတ်တလောငါဘလော့ဂါကမ္ဘာနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုစီစဉ်၏။ ငါအင်တာနက်နဲ့ Apple နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုနှစ်သက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ iPhone လှည့်ကွက်အသစ်များကိုလေ့လာရတာနှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်သင်တွေ့နိုင်သောအရာအားလုံးကိုထုတ်ဖော်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
အမြဲတမ်းလေ့လာသင်ယူရန်နှင့်စိတ်အားထက်သန်။ ငါသိသမျှအရာအားလုံးကိုအစီရင်ခံရတာကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါက iPhone ကိုအမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ၊ ဒီအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့သတင်းကိုပိုကောင်းအောင်ပြောပြဖို့ငါ့ကိုကူညီပေးတယ်။
ကျွန်ုပ်၏နည်းပညာကိုကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုသည် Apple နှင့်မွေးဖွားခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်ကိုအမြစ်တွယ်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်ငါသည်ပိုမိုသင်ယူလိုသောအရာများကိုရပ်တန့်မရနိုင်ပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတများနှင့်အတူ iPhone နှင့်အခြားအမှတ်တံဆိပ်၏အကောင်းဆုံးသတင်းများအကြောင်းရေးသားရန်ကျွန်ုပ်ရေးသည်။
ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော Apple နည်းပညာ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ကျွန်ုပ်အားပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းနှင့် iPhone ကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်စာတမ်းများတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးသောအစီရင်ခံစာများနှင့်သတင်းများကိုရေးသားရန်နောက်ဆုံးအခြေအနေရှိသည်။
ကွန်ပြူတာသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ပြီး iOS အသုံးပြုသူသည် ၅ နှစ်ကျော်ကြာသည်။ ခရီးသွားရတာကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ iPhone ကိုအမြဲတမ်းတိကျသေချာစွာအစီရင်ခံနိုင်ဖို့၊ စမတ်ဖုန်းနဲ့အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့တယ်။
နည်းပညာအသစ်များနှင့် iOS နှင့် OSX အသုံးပြုသူများ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် Apple ကိုနှစ်သက်သူတစ် ဦး ပါ။ စာဖတ်သူများသည်အကောင်းဆုံး iPhone သတင်းများကိုသိရှိနိုင်ရန်ဤမဂ္ဂဇင်းကိုကျွန်ုပ်ရေးသည်။
ကျွန်ုပ်သည် Apple ကမ္ဘာကိုချစ်သောကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ ငါကြိုက်နှစ်သက်သောဘာသာရပ်များအကြောင်းသင်ယူခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးများတွင်သင်၏ iPhone နှင့်သင်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသုံးဝင်မည့်အရာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
စာနယ်ဇင်းသမားသည် gadget များနှင့်မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းတို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်သည်။ iPhone, iPad, Apple Watch နှင့် MacBook Pro အကြောင်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိနေနေတဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့စာဖတ်သူတွေအားလုံးသတင်းကိုသတိပြုမိရန်ဖြစ်သည်။